Dia mankany Islandy | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Islandia, Inona no ho hita
Raha tianao fandroana mafana ary ny natiora dia sarotra foana, avy eo tsy maintsy mitsidika an'i Islandy ianao. Efa nanambara ny praiminisitra fa manana drafitra izy ireo hanokatra indray ny firenena amin'ireo mpizahatany vahiny manomboka ny faha-15 amin'ity volana ity.
Ahoana? Fitsapana haingana ho an'ny Covid-19 no hatao eny amin'ny seranam-piaramanidina, rehefa tonga, ary raha manaporofo izany dia 14 andro ny quarantine. Tsy mbola misy ny fampahalalana bebe kokoa, saingy misy ny fanantenana hiverina amin'ny laoniny miadana ireo dia. Ka te hanao mahafinaritra ianao fitsangatsanganana any Islandy?
2 Fizahan-tany Islandy
Any avaratra andrefan'i Eropa izy io, a firenena nosy avy amin'ny Ranomasimbe Atlantika, ary ny renivohiny dia Reykjavik. Manana be hetsika volkano sy jeolojika ary noho izany dia izy no manana ny endriny an-tendrombohitra, glacier, lembalemba ary renirano.
Ny lehilahy voalohany izay sahy nanitsaka ny nosy ary nonina azy dia Nordic sy Gaelic ary ilay nosy dia teo am-pelatanan'i Norvezy sy Danemark ihany koa nandritra ny tantarany, mandra-pahatongan'ny fahaleovantenany farany, efa tamin'ny taonjato faharoa-polo.
Islandia demokrasia io izay mbola miaina ao anatin'ny Firenena misahana ny fifanampiana. Na eo aza ny harinkarenan'ny tsena dia manome fampianarana sy fikarakarana ara-pahasalamana maimaimpoana ho an'ny mponina ao aminy. Nanana krizy ara-toekarena lehibe tokoa izy tamin'ny 2008, noho ny banky, ary efa tafarina izao, na dia singa lehibe iray aza ny fizahantany. voan'ny areti-mifindra ny firenena.
Ny carte postale mahazatra izay amporisihin'ny firenena dia ny azy dobo an-kalamanjana any ivelany, ka eo no handehanantsika voalohany. Ny hetsika ara-jeolojika an'ny nosy dia midika fa be dia be ny loharano mafana, saingy marina fa tsy tamin'ny taonjato faha-XNUMX vao niorina tamin'ny fizahan-tany sy ny lokany izany.
Ny dobo geothermal malaza indrindra dia ny Blue Lagoon. Eo amin'ny saha lava eo amin'ny Saikinosy Reykjanes no misy azy. akaikin'i Reykjavík. Misy aza ny morontsiraka fasika fotsy tsara tarehy sy ny ranomasina mafana, izay mahatratra io mari-pana io amin'ny tsindrona rano mafana. Azonao an-tsaina ve izany paradisa izany? Navelako daholo ny ketrona noho ny ora nijanonako ...
Ho an'ny andro spa izay tokony hamandrihanao Lagoon ary afaka mandany iray andro na mijanona amin'ny hotely ianao. Azonao atao ihany koa ny misakafo ao amin'ny Lava Restaurant, izay ao anatin'ny rindrin'ny lava any amin'ny moron'ny lagoon, miaraka amin'ny fahitana mahafinaritra. Manontany tena ianao maninona no manga ny lagon? Ho an'ny atin'ny silika ananany ary taratry ny hazavana hita maso.
Ny hazavana hita maso dia ny karazana angovo elektromagnetika azon'ny mason olombelona jerena. Mihetsika amin'ny 300 metatra isan-tsegondra ireo onja izay lohan'ny pin. Ankoatra izany, fotsy ihany no fijery ny loko rehetra.
Mora ny mahita an'io amin'ny alàlan'ny prisma, toy ny hitantsika tany am-pianarana. Miverina any amin'ny silica sy ny Blue Lagoon, ny tena izy dia silica dia fitambaran'ny silika sy oksizenina, a mineraly bioaktifa izay mijanona mihantona ao anaty rano ary noho izany ny fandinihana. Izy io dia taratry ny halavan'ny hazavana hita maso ihany, ny sisa amin'ny loko dia voadoka ary noho izany dia manga be ilay farihy.
Safidy lehibe hafa koa Fandroana voajanahary voajanahary. Ny renirano dia manana rano izay mikoriana mivantana avy amin'ny fantsakana Landsvirkjun, ao Bjarnarflag. Tonga amin'ny alàlan'ny fantsona iray izy, mankany amin'ny tanky ary avy eo, amin'ny alàlan'ny fantsona dimy, mifangaro amin'ny rano mafana ao anaty tanky izy io.
Avy eo, ny lagoon dia artifisialy saingy manana fasika malefaka sy vatokely faran'izay tsara izy io. Manana mineraly alkaly io rano io, ary tsara ho an'ny fandroana satria tsy manana otrika otrikaretina izy satria ny firafitry ny rano mihitsy no mahatonga ny bakteria tsy ho vita.
Eny, manana solifara be dia be izy noho izany dia tsara ny hanaisotra ireo firavaka. Fa ho an'ny asma dia mahafinaritra ary ho an'ny hoditra koa. Ampiana amin'ny lagoon dia saona roa, izay ny etona ainy dia mipaka amin'ny tany noho ny kiakiaka amin'ny gorodona, dia toy izany izy ireo sauna voajanahary miaraka amin'ny mari-pana miakatra hatramin'ny 50ºC. Mahafaty ity maripana misy hamandoana 100% ity, saingy soa ihany fa afaka mitsambikina any anaty ranonorana mangatsiaka ianao, eo alohan'ireo saona.
Misy ihany koa ny «cafeteria» sy ny faritra ivelan'ny trano hiarahana. Afaka manana lasopy amin'ny andro miaraka amin'ny mofo namboarina, salady, kafe, dite ary mofomamy. amin'izao fotoana izao misy ny tolotra amin'ny fisokafana indray ary mandeha ny roa handoa ny iray. Cool! Ny olon-dehibe iray dia mandoa 5.500 XNUMX ISK, na dia mandoa misaraka aza ianao amin'ny fanofana lamba famaohana, akanjo fandroana ary fandroana. Ity tranonkala ity sokafy mandritra ny taona ary raha mitsidika ny tranonkalany ianao dia hahita ny fampahalalana rehetra amin'ny Espaniôla.
Glacierworld dia spa any Hoffell, toerana misy natiora mahatalanjona, misy tendrombohitra avo sy gilasy mangatsiaka. Ny hotely misy spaoro 3 kilometatra monja avy eo amin'ny glacier izy io, zava-kanto ho solon'i Vatnajókull, iray amin'ireo toerana fizahan-tany malaza indrindra any Islandy, miaraka amin'ireo lalambe mandeha an-tongotra sy mankafy ny tontolo. Manolotra karazana efitrano / casitas sy fandroana mafana geothermal telo izy io, maimaimpoana. Raha tsy vahininao ianao dia afaka mandoa taha isan'andro sy mankafy azy ireo.
Geosea dia iray amin'ireo meccas geothermal any Islandy. Any avaratry ny nosy izy io ary ny ranony dia mifangaro tsy manam-paharoa amin'ny ranomasina misy mineraly sy masira misy rano avy amin'ny tsinain'ny tany. Eo amin'ny hantsam-bato izay mijery an'i Helodrano Skjálfandi sy ny faribolana Arctic. Avy eto ianao dia afaka mahita trozona ary na ireo hazavan'ny Avaratra tsara tarehy aza.
Ireto ny sasany amin'ireo toeran-tany spa izay omen'i Islandy, fa ny nosy dia manolotra bebe kokoa antsika amin'ny lafiny tontolon'ny tany sy hetsika ivelan'ny trano. Ohatra, ny Vatnajökull National Park, ny lehibe indrindra eto amin'ny firenena. Niorina tamin'ny 2008 izy io ary manana glacier mitovy anarana sy ny manodidina azy izay talohan'ny daty dia efa zaridainam-pirenena koa. Noho izany, izy no iray amin'ireo lehibe indrindra any Eropa.
Ny ankamaroan'ny valan-javaboary dia eo ambanin'ny tampon-dranomandry glacier, fa samihafa ny tontolo amin'ny alàlan'ny hetsika volkano. Ary io indrindra no tena mahasarika azy. Azonao atao ny mahita ny rano mikoriana mankamin'ny ranomasina, volkano iray, tendrombohitra, fasika mainty izay teraka tao amin'ny volkano ary entina amoron'ny renirano noho ny tondra-dranomasina, lakana goavambe misy ranomandry mitsinkafona ... Ny marina dia , tsy mila mijanona mitsidika an'ity toerana itodiana ity ianao satria mahavita tanteraka ny fitsangatsanganana any Islandy.
Raha manampy gastr gastrie ianao ary mandeha amin'ny fandroana mafana dia lasa toerana fitsangatsanganana tsara i Islandy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Islandia » Dia mankany Islandy
Tanàna mahaliana indrindra any Seville